स्पेनका नयाँ प्रधानमन्त्री सान्चेज को हुन् ? - विश्व - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ १८, २०७५ सीएनएन/बीबीसी
मड्रिड — स्पेनी प्रधानमन्त्री मारियानो राखोयविरुद्ध संसद्‌मा शुक्रबार पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमा पराजित भएपछि सरकार ढलेको छ ।
एक भ्रष्टाचार मुद्दामा विवादित राखोयोविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका समाजवादी नेता पेद्रो सान्चेज नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन्। ‘हामीले हाम्रो देशको लोकतन्त्रको इतिहासमा नयाँ निर्णय गर्दै छौं,’ शुक्रबारको मतदानका क्रममा सान्चेजले भने।
राखोय आधुनिक स्पेनको इतिहासमा संसद्‌मा अविश्वासको पराजित हुने पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। स्पेनमा सन् २०११ देखि कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भएका थिए।
शुक्रबार हुने मतदानमा पराजित हुने लगभग निश्चित भएपछि राखोयले सांसदहरुलाई सम्बोधन गर्दै ‘आफूले पाएको भन्दा निकै राम्रो स्पेन छाड्न पाउँदा निकै सम्मानित महसुस गरेको’ बताएका थिए। साथै उनले नयाँ प्रधानमन्त्री साञ्चेजलाई बधाई तथा शुभकामनासमेत दिएका छन्।
को हुन् सान्चेज?
पेद्रो सान्चेज सन् २०१४ मा स्पेनी सोसलिस्ट पार्टीको प्रमुख चयन भएका हुनुअघि खासै चर्चित थिएनन्। पूर्व अर्थशास्त्री तथा बास्केटबल खेलाडी सान्चेजले विभाजित पार्टीलाई एक बनाउने तथा पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याउने प्रतिबद्धताका साथ पार्टी प्रमुख बनेका थिए।
बेल्जियमबाट राजनीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर सान्चेजले यसअघि केही समय अध्यापनसमेत गरेका थिए। सन् २००९ मा स्पेनी संसदो सदस्यमा निर्वाचित भएका उनी अर्थशास्त्र तथा वित्त मन्त्रीसमेत बनेका थिए।
प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ २१:३३